Namanje isashaywa indiva imithetho yemvalelwakhaya - Bayede News
by nguSabelo Maphumulo	, Anathi Mtaka
Iyichilo eyezingane ezingondingasithebeni
Ukwehliswa kwezigaba zokhuvethe kunciphise uvalo nokukhathazeka kubantu ngokubhebhetheka kwaleli gciwane eselimise kabi umhlaba wonke.
Kusukela uMengameli wezwe uMnu uCyril Ramaphosa ememezela ukuthi izwe lizokwehlisa izigaba zomvalelwakhaya izakhamuzi ezinye ezweni zaqala ukungahloniphi nokungalandeli imigomo ethize eyayibekiwe ukugwema ukubhebhetheka kokhuvethe.
Lokhu kwephulwa kwemigomo yemvalelwakhaya kungenzeka ukuba kudalwa yizinto ezimbili, eyokuqala kungaba ukufuna inzuzo kuthi okwesibili kube ukubalekela izikweleti kanye nendlala.
Le mboni iyona ebalulekile kwaboHlanga ngenxa yokuthi yiyo ebayisa lapho bezokwazi ukuthola khona amasenti okuphila. Kodwa futhi le mboni kungenzeka ukuthi yiyo esibafaka engcupheni yokuthola ukhuvethe. UHulumeni waphakamisa ukuthi itekisini kumele ilayishe abantu abali-10, kodwa muva nje konke lokhu akusenzeki. Abashayeli bamatekisi sebelayisha imoto igcwale phama, kakhukazi ngezikhathi zantambama. Yize bezivikela ngokuthi sesiside isikhathi belambile kodwa iqiniso lithi lusekhona ukhuvethe.
Emasontweni okuqala omvalelwakhaya abantu bebeyihlonipha imiyalelo bebengeniswa ngesibalo esithize ezitolo futhi nazo izakhamuzi zikuhlonipha lokho. Kodwa kusukela ukuncishiswa kwezigaba zomvalelwakhaya konke lokho kujikile, abantu sebengena noma ikanjani ezitolo kakhulukazi lezi ezakhelene naboHlanga. Iqiniso lithi yebo abezitolo bayawafutha amakhasimende izandla ngezibulalimagciwane kodwa ukuba baningi kwabantu kuchaza ukuthi kuzoba lula ukuthi abantu bathelelane ngokhuvethe. Mhla kuqala umvalelwakhaya izitolo zaziphoqiwe ukuba zibe nemishini ehlola izinga lokushisa komzimba womuntu kodwa osekuvela manje ukuthi ezinye le mishini azisayisebenzisi kuthi lezi ezivulwe sekuncishiswa izigaba zomvalelwakhaya zona azikaze ziqale ziyisebenzise. Konke lokhu kugcina kufaka noma kubeka abathengi engozini yokutheleleka ngaleli gciwane.
Ukuzivocavoca kwakungavumelekile kwasekuqaleni kwemvalelwakhaya, kodwa kwahamba isikhathi kwavumeleka kodwa ngezikhathi ezithize yize kunjalo kepha abantu kwakuthiwa abazivocavoce ngabodwana.
Emasontweni adlule kuke kwasabalala ividiyo yequlu labantu lizilolonga lihlangene emgwaqeni waKwaMashu okwakuyinto engavumelekile. Kwaphinda futhi lokhu kungalalelwa kwemigomo ethize yomvalelwakhaya kwabonakala eCape Town ngosuku lokuqala lokwehliswa kwezigaba lapho kwabonakala ividiyo nezithombe zabantu abaningi bezivocavoca ngasolwandle. Ekuvuleni ukuzivocavoca uHulumeni wabeka iphuzu loktuhi umuntu akajime ngayedwa kungabi amaqembu kodwa kulamavidiyo kuyabonakala ngokusobala ukuthi abantu babehamba ngamaqembu.
Utshwala yinto ethandwayo eNingizimu Afrika ngenxa yokuthi nazesibalweni zamazwe leli zwe likhona kwali-10 okuvela ukuthi utshwala buphuzwa khona kakhulu. Lokhu kwafakazelwa ngesikhathi uMengameli uRamaphosa ebubuyisa ukuba budayiswe ngemuva ngokuthi kwabonakala amavidiyo abantu bejabule. Kwathi ngosuku lokuqala bubuyile abantu babuthana khona ezitolo zotshwala ezagcwala phama.
Iminyaka engamashumi amabili nambili yenkululeko
Kodwa ukubuya kotshwala kusigcizelele kakhulu isithombe sokuthi ukwehla kwezigaba zemvalelwakhaya kwenze abantu bangayihloniphi imigomo yawo. Lokhu kungenxa yokuthi ezindaweni eziningi ezigcwala aboHlanga okungamalokishi isibalo sabantu abathenga bese behamba bebuphuza emigwaqeni siyanyuka, abantu sebeyabuthega babuthane babuphuze ndawonye lokho okungavumelekile ngaphansi komgomo yokulwa nokubhebhetheka kokhuvethe othi abantu abangavakashelani kodwa uthola sebebutheni egcekeni elithize bedla bona utshwala lobu.
Ukubonakala kwamaphoyisa namasosha kwehla
Isandla samaphoyisa kanye namasosha ngezigaba zokuqala zemvalelwakhaya saqinile futhi ayebonakala ephithizela, eqikelela ukuthi abantu bayayilalendela imithetho kaHulumeni ebekiwe. Kodwa muva nje lokho sekufana nephupho sekuba yinhlanhla ukuthi ubone amaphoyisa ehamba emgwaqeni. Okwamasosha khona akuchazeki ngoba ngemuva kokwedliswa kwezigaba awaphindanga abonakala emgwaqeni kwangathi nje bekuyiphupho elipheliswe ukuphaphama kwakho.
Imigwaqo kusukela kwehliswa izigaba seyigcwala izingane ezincane zidlala kuyo kube sengathi akhukho ogciwane elihlasele izwe futhi ayikho imithetho ebekiwe ukuba ilandelwe. Okubuhlungu ngalokhu ukuthi nazo izingane azishiyiwe ngaphandle kwabasencupheni yokuthola futhi babulawe ukhuvethe lwansondo.